Afhayeenka Al-shabaab oo ka hadlay weerarkii degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAfhayeenka Al-shabaab oo ka hadlay weerarkii degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose
Afhayeenka Al-shabaab oo ka hadlay weerarkii degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose
Hiiraan Xog, Sep 30, 2017:- Afhayeenka Alshabaab oo ka hadlay weerarkii ay ku qaaden xerada ciidamada ee degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Cali Dheere oo la hadlay Warbaahinta Al-shabaab, ayaa sheegay in weerarka Bariire uu qeyb ka noqon doono weerarada taariikhiga ah oo ay geysteen Alshabaab.
Waxa uu sheegay in weerarka Bariire uu ahaa mid abaabulnaa oo maleeshiyaadka Hubeysan shalay Subax ku qaaden Saldhigyada Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha hoose.
Cali Dheere waxa uu Ujeedka weerarka ku sheegay mid ay ugu aargudayeen dadkii shacabka ahaa ee dhawaan lagu laayay deegaanka Bariire iyo guud ahaan Gobolka Shabellaha Hoose.
Waxa uu carab dhabay in dagaalkii shalay ka dhacay Bariire ay ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya, wuxuuna intaasi ku daray ciidamada ay dileen in tiro ahaan ay ku dhaw yihiin 30 askari, sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu Cali Dheere ku faanay in maleeshiyaadkooda ay qabsadeen 11 gaadiidka dagaalka oo ay lahaayeen ciidankii ku sugnaa Xerada Bariire.
Waxa uu intaa kusii daray in dagaalka ay ku furteen Hub farabadan oo uu sheegay inay muhiimad gaara u leeyihiin Kooxda.
Dhinaca kale,Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee deegaanka Bariire, ayaa dhankooda sheegtay inay iska caabiyeen Shabaabkii soo weeraray, ayna ka dileen 18 askari sida uu sheegay General Sheegow Taliyaha Guutada 20-aad ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya.